Halyeygii reer Masar Ee Mido Oo Mar Kale Qarxiyey Qorshe Real Madrid Kusoo Xero-gelinayso Mohamed Salah | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Halyeygii reer Masar Ee Mido Oo Mar Kale Qarxiyey Qorshe Real Madrid Kusoo Xero-gelinayso Mohamed Salah
Published on April 17, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(17-4-2018) Xiddigii hore ee xulka qaranka Masar ee Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid oo loo yaqaanay Mido ayaa kashifay qorshe ay kooxda Real Madrid ku doonayso inay xagaaga kusoo xero geliso xiddiga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Mohamed Salah, kaas oo wakhtigan hoggaaminaya gool-dhalinta guud ahaan horyaallada qaaradda Yurub.
Mido waxa uu sheegay in Real Madrid ay si aad ah uga shaqaynayso, isla markaana la dhacsan tahay tayada iyo qaab-ciyaareedka Mohamed Salah.
“Real Madrid way jeceshahay Salah, dhamaanteenna waynu arkaynaa bandhig ciyaareedka liita ee Gareth Bale iyo Karim Benzema ee hannaanka ciyaareed ee 4-4-2.” Sidaas waxa yidhi Mido oo waraysi siinayey warbaahinta King Fut.
Ahmed Mido waxa uu xusay in ka hor intii aanu horyaalku bilaabmin uu ka baqayey in Salah uu ku fashilmo Liverpool, laakiin ay hadda u caddaatay inuu heerka xiga u boodi doono, taas oo ah Real Madrid.
“Waxa aan ka baqayey inuu Liverpool ku fashilmo, laakiin waxay ila tahay inuu diyaar u yahay inuu u boodo heerka xiga. Real Madrid waxay isticmaali kartaa xirfaddiisa.” Sidaas ayuu yidhi.
Tan iyo markii uu Salah tegay garoonka Anfield oo ahayd bilowgii xili ciyaareedka, waxa uu dhaliyey 30 gool oo horyaalka Premier League ah, waxaana ay taasi keentay in Mido uu ku doodo in Salah uu yahay ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ee soo maray waddanka Masar.
“Waxa aan ogahay in dad badan aanay igu raaci doonin, laakiin fikirkayga, Mohamed Salah waa ciyaartoygii ugu wanaagsanaa taariikhda kubadda cagta Masar” Sidaas ayuu mar kale yidhi Mido.
Si kastaba ha ahaatee, marka uu dhamaado koobka Adduunka ee badhtamaha sannadkan lagu qaban doono Ruusha ayaa la ogaan doonaa halka uu cago-dhigto mustaqbalka Salah oo aan isaga wax war ah laga haynin.